Film laga sameeyay Gudniinka Fircooniga oo la daawan doono dhawaan – Bandhiga
Film laga sameeyay Gudniinka Fircooniga oo la daawan doono dhawaan
Warbaahinta Caalamiga ah ee Virgin Dublin oo ka qeyb qaadaneysa olalaha la dagalanka Gudniinka Firooniga ayaa shaaca ka qaaday in la sameeyay Filin ku saabsan Gudniinka Fircooniga oo Ifraax Axmad kaga sheekeyneysa waayaheedii magaalada Muqdisho.
Filinka ayaa laga daawan doonaa shaashadaha caalamka 22 Bishan Fibaaryo ee 2019, waxaana Film-ka uu ku saabsanyahay qiso dhab ah oo la xiriirta awood siinta dumarka iyo gudniinka fircooniga waxaana Filmkan uu ka hadlayaa Sheeko dheer oo Ifraax Axmad kaga hadleyso gudniinka Fircooniga hadana ah qof u ololeysa ka hortaga Gudniinka Fircooniga.
Ifraax ayaa ka sheekeyneysa dhibaatada uu leeyahay Gudniinka, waxa ay ka dhaxlaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo caqabadaha ay kala kulman markii la jarjaro xubinta tarankooda, iyadoo caalamka la wadaagi doonta dhibka weyn ee dumarka heesta gaar ahaan Soomaalida oo kamid ah dalalka caadada ka dhigatay gudniinka foosha xun ee jarjarida xubnaha taranka.
Flimka waxaa qoray soona agaasimay Mary McGuckian, waxaana diirada lagu saari doonaa Ifrax Axmad oo ka sheekeyneysa xaalado xun iyo safar dheer oo qaxootinimo ahaan kaga soo bilowday Soomaaliya, sidoo kalena lagu ciribtirayo gudniinka Fircooniga.
Waxaa filmka looga hadlayaa sheekooyin dhab oo isku badalay olale caalami ah oo Ifraax Axmad hogaamiso iyadoo ay jili doonaan xidigo caan ah sida Barkhad Abdi oo loo yaqaano Captain Phillips iyo Maryan Mursal iyo jilaayaal ajaanib ah.